UJohn Calvin wayenomnye weengqondo ezintle kunabo bonke abafundisi bezeNguquko, bevusa intshukumo eguqulela ibandla lamaKristu eYurophu, eMelika, ekugqibeleni lonke ilizwe.
UCalvin wabona insindiso ehlukile kuneMartin Luther okanye kwiCawa yamaRoma Katolika . Wafundisa ukuba uThixo uhlukanisa uluntu ngamaqela amabini: otyunjweyo, oya kusindiswa aze aye ezulwini , kunye nabachasayo, okanye abalahlwayo, abaza kuchitha ngonaphakade ukuhlala esihogweni .
Le mfundiso ibizwa ngokuba yinto emiselweyo.
Endaweni yokufa ngenxa yezono zabantu bonke, uYesu Kristu wafa kuphela ngenxa yezono zabakhethiweyo, uCalvin uthe. Oku kubizwa ngokuba yiNtlawulo yokuXhobisa okanye ukuKhuselwa okuKodwa.
Abakhethiweyo, ngoCalvin, abakwazi ukumelana nokubiza kukaThixo ekusindisweni kwabo. Wabiza le Mfundiso engabonakaliyo.
Ekugqibeleni, uCalvin wayehluke ngokupheleleyo kwimfundiso yamaLuthere kunye namaKatolika kunye nemfundiso yakhe yokunyamezela kwabangcwele. Wafundisa "xa usindisiwe, uhlale usindiswe." UCalvin wayekholelwa ukuba xa uThixo eqala inkqubo yokungcwaliswa kumntu, uThixo wayeya kuhlala kuyo de loo mntu ephezulu. UCalvin wathi akukho mntu unokulahlekelwa usindiso lwabo. Ixesha lesimanje le mfundiso kukukhuseleko ngonaphakade.
Ubomi bokuqala bukaJohn Calvin
UCalvin wazalelwa eNoyon, eFransi ngo-1509, unyana wegosa elingummeli owayephethe i-cathedral yaseKatolika. Ngokuqondakalayo, uyise kaCalvin wamkhuthaza ukuba afunde ukuba abe ngumfundisi wamaKatolika.
Ezi zifundo zaqala eParis xa uKalvin eneminyaka eyi-14 kuphela. Waqala kwiKholeji yaseMarche kamva wafunda kwiKholeji yaseMontaigu. Njengoko uCalvin enza abahlobo abaxhasa ukulungiswa kwecawa entsha, waqala ukukhwela kwiKatolika.
Watshintshe yakhe enkulu. Endaweni yokufunda ububingeleli, watshintshela kumthetho wabantu, baqala ukufundelwa ngokusemthethweni kwisixeko sase-Orleans, eFransi.
Wagqiba ukuqeqeshwa kwakhe ngokomthetho ngo-1533 kodwa wafuneka abaleke eParis yamaKatolika ngenxa yokuzibandakanya nabaguquleli becawa. Icawa yamaKatolika yayiqale ukuzingela abaphanduki kwaye ngo-1534 yatshisa abantu abangama-24 abaxhamli kwi-stake.
UCalvin wabuyela emva kweminyaka emithathu ezayo, efundisa nokushumayela eFransi, e-Itali naseSwitzerland.
UJohn Calvin eGeneva
Ngowe-1536, umqulu wokuqala weCalvin umsebenzi omkhulu, i -Institutes of Christian Religion , yapapashwa eBasel, eSwitzerland. Kule ncwadi, uCalvin wayebeka ngokucacileyo iinkolelo zakhe zonqulo. Ngaloo nyaka, uCalvin wazifumana eGeneva, apho umProtestanti omkhulu ogama lakhe linguGuillaume Farel wamqinisekisa ukuba ahlale.
I-Geneva ekhuluma ngesiFrentshi yayisilungele ukulungiswa, kodwa amaqela amabini ayekulwela ukulawula. I-Libertines yayifuna ukulungiswa kwecawa encinci, njengokuba kungekho nkonzo yokunyanzela icawa kwaye yayifuna ukuba oomantyi balawulwe abefundisi. Abaxhasi, njengoCalvin noFarel, babefuna utshintsho olukhulu. Iintlupheko ezintathu ezithe zavela kwiCawa yamaKatolika zenzeka: ii-monasteries zavalwa, uMisa wawunqatshelwe, kwaye igunya lopapa lalahlwa.
Inzuzo kaCalvin yabuyela kwakhona ngo-1538 xa iLibertines ithatha iGeneva. Yena noFarel babalekela eStrasbourg. Ngowe-1540, iLibertines yayisusiwe kwaye uKalvin wabuyela eGeneva, apho waqala khona uluhlu olude lweenguqulelo.
Uyayilungisa ibandla kwi-apostolic model, kungekho bhishophu, abefundisi benqanaba elilinganayo, kunye nabadala kunye namadikoni . Bonke abadala nabadikoni babengamalungu omgaqo-nkqubo, inkundla yecawa. Esi sixeko sasiye sondela kwinkululeko, urhulumente wenkolo.
Ikhodi yokuziphatha yaba ngumthetho wobugebengu eGeneva; isono saba ngumthetho olwaphulo-mthetho. Ukuxothwa, okanye ukuphonswa ngaphandle kwecawa, kwakuthetha ukuvalwa kweso sixeko. U-Lewd kucula kungabangela ukuba ulwimi lwakhe luhlabe. Ukuhlambalaza kwahlwaywa ngokufa.
Ngowe-1553, isazi saseSpain uMichael Servetus sifike eGeneva waza saza kubuza uZiqu zintathu , imfundiso ebalulekileyo yamaKristu. UServetus wahlawuliswa ngetyala, wazama, wamgwetywa waza watshiswa kwisibonda. Kwiminyaka emibini kamva iLibertines yayingummvukelo, kodwa iinkokeli zazo zazityhulwa zaza zabulawa.
Impembelelo kaJohn Calvin
Ukusasaza iimfundiso zakhe, uCalvin wamisela izikolo eziziiprayimari neziziisekondari kunye neYunivesithi yaseGeneva.
I-Geneva nayo yaba yindawo yabaguquleli ababesabela kwiintshutshiso kumazwe abo.
UJohn Calvin uhlaziye iziko zakhe zeNkolo yamaKristu ngo-1559, kwaye yaguqulelwa kwiilwimi eziliqela ukusabalalisa lonke elaseYurophu. Impilo yakhe yaqala ukuhluleka ngo-1564. Wafa ngoMeyi waloo nyaka waza wangcwatywa eGeneva.
Ukuqhubela phambili iNguquko ngaphaya kweJeneva, abavangeli beCalvin bahamba baya eFransi, eNetherlands naseJamani. UJohn Knox (1514-1572), omnye wabavakalisi bakaCalvin, wazisa uCalvinism eScotland, apho iCawa yePresbyterian ineengcambu zayo. UGeorge Whitefield (1714-1770), enye yeenkokeli zamaqela aseMethodist , naye wayengumlandeli kaCalvin. UMhlophe wamthabatha umyalezo weCalvin kwiimakoloni zaseMerika waza waba ngumshumayeli ohamba phambili kunomdla wexesha lakhe.
Imithombo: Indawo yeSifundo seMbali, iCalvin 500, ne-carm.org
Amadoda aseMing, iYuan Qi kunye neentso
Yisiphi Isifuba Esikhethiweyo?